အခမဲ့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းသည်သင်၏ပုံမှန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းဆိုဒ်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားကမ္ဘာနှင့်အထွေထွေအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်,အလုပ်လုပ်၏တစ်နှစ်ကျော်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဆိုဒ်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့စုဆောင်းမှုမျိုးကိုအတိအကျသိသွားပါတယ်။ ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစုဆောင်းမှုအတွက်ဂိမ်း ၅ ခုကိုသာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ထိုသို႔တည္ေဆာက္ထားေသာလိင္ဂိမ္းမ်ား၏မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္မယုံႏိုင္စရာေကာင္းေသာဂရပ္ဖစ္မ်ားႏွင့္အတူပါလာေသာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာဂိမ္းကစားနည္းသည္သင့္အားစမ္းသပ္လိုသည့္စိတ္တိုင္းက်ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။, ကျနော်တို့ကစားသမားသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းခံစားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်ချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ5ဂိမ်းများနှင့်အတူသာသွားရသောနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းငါတို့ရှိသမျှသည်ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးကနေအသွားအလာရှိသည်သေချာ။
ကျနော်တို့ဤမျှလောက်အသွားအလာရှိသည်ကြောင့်,ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်နှင့်ဂိမ်းလုံးဝအခမဲ့မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲ။ ဒီဆိုက္မွာေၾကာ္ျငာေတြ ႐ိုက္ေနၾကေပမယ့္တျခားညစ္ညမ္းဂိမ္းေတြမ႐ိုက္ဖူးေသးလို႔ ဘာမွမေျပာေတာ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရှိသည်အနည်းငယ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့ဂိမ်း၏လမ်း၌ရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်သူတို့အပြေးအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စာကြည့်တိုက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံပါစေ။ ကျနော်တို့ပြီးသားညစ်ညမ်း၏အပေါငျးတို့သအဓိကအမျိုးအစားကနေဂိမ်းများ,ငါတို့သည်လည်းကွီးမွတျကစားသမားများနှင့်မင်းသမီးများအတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့လာကြ၏။ ဒီစုဆောင်းမှုမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဂိမ်းအားလုံးကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
ဒါကြောင့်ဖြောင့်ညစ်ညမ်းပရိသတ်များအတွက်ဂိမ်းမှကြွလာသောအခါ,လူကြိုက်အများဆုံးသူမြားကိုလိင်ဒူဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့ကျွန်မဟာအဖြစ်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့စေဖို့သင်ဟာဆယ်ကျော်သက်များ၊မီနာများနှင့်ပင်အချို့သော ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်လူကြိုက်များ,မဖွယ်မရာစွန့်စားအတူလာမယ့်သောလိင်ဂိမ်းများမှာ,ငါတို့သည်ယောက်ျားသူတို့၏မေမေ,သူတို့ရဲ့သမီးနှင့်သူတို့၏ညီအစ်မတွေကိုအပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်လာမယ့်နေသောမင်းသမီးပျော်မွေ့ဖို့အမျိုးသမီး-အာရုံစူးစိုက်ဂိမ်းတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးယူမှုအားနည်းတယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ်တော့,လိင်ဖြောင့်ယောက်ျားတွေများအတွက်ဂိမ်းအတွက်ကဲ့သို့အမာခံဖြစ်ပါတယ်,ဒါပေမယ့်ဂိမ်းအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေဖြစ်ပြီးမင်းသမီး၏စဉ်းစားစေခြင်းငှါအချို့ရှိပါတယ်. လိမ်လည်ခြင်းဇနီးစွန့်စားခန်းများ၊ဖေဖေဇာတ်လမ်းများ၊ဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံများသို့မဟုတ်မုဒိမ်းမှုစိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုဤနေရာတွင်ခံစားနိုင်သည်။
သင်ကစားချင်လိမ့်မယ်အားလုံးကွိတျဂိမ်းရှိသည်။ လိင်တူချစ်သူကစားသမားများသည်သူတို့၏လိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာစေမည့်လိင်ကွဲပြားသူများနှင့်လိင်တူချင်းချိန်းတွေ့ခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအစစ်အမှန်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းရှိသည်။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားႏွင့္စီအိုင္ေအအမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကိုေပးစြမ္းပါသည္။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအများကြီးပိုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှဒီမှာရှိသမျှသောကြှနျတျောတို့ဂိမ်း,ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများနှင့်ကြှနျတျောတို့ကဒီမှာရှိသမျှသောကြှနျတျောတို့ဂိမ်းအကြောင်းပြောနေတာစတင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီညကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးမျိုးစူးစမ်းခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ!
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်ပလက်ဖောင်းရုံပေါ်မှာဂိမ်းအဖြစ်ယနေ့အထိအဖြစ်တက်သည်။ သင်စာကြည့်တိုက်မှတဆင့်အကျိုးရှိစွာအညွှန်းများအတွက်လိုအပ်သမျှအန်းဒရွိုက်ကိရိယာတွေရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဂိမ်းစနစ်တကျပစ်ခတ်သော့ချက်စာလုံးများ,ဒါကြောင့်သင်ကစိတ်ကူးယဉ်ရှိပါကရုံရှာဖွေရေးဘားထဲမှာဆက်စပ်သက်တမ်းရိုက်ထည့်နှင့်သင်ချက်ချင်းရလဒ်များကိုရလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းသင်မှတ်ချက်များနှင့်ဖိုရမ်ပို့စ်များမှတဆင့်အခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အရာအခမဲ့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းအပေါ်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ဒါကတော့အစပဲရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီစုဆောင်းမှုအသစ်ဂိမ်းထည့်သွင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်သေချာသူတို့အားလုံးကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်!